I Order You ( 2015 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel April 09, 2017
Myanmar Asian TV Channel Fan တွေ အချစ်မှာကျဆုံးဖူးကြတယ်မလား မကျဆုံးဖူးတဲ့သူတော့ မရှိကြဘူး ထင်တယ် ... ဟုတ်တယ်မလား ? :-P ဒီကားထဲမှာတော့ မင်းသမီးလေး က အချစ်ကို ပထမဆုံး သူ့ဘ၀မှာ ခံစားဖူးတဲ့နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ... ပေါကြောင်ကြောင်လေးပေါ့ ... မင်းသားရဲ့ ဟင်းချက်လက်ရာလေးက သူ့အမေရဲ့ ဟင်းချက်လက်ရာနဲ့တူတော့ မြင်ရုံနဲ့ချက်ချင်းကြွေသွားတာပေါ့ ... မင်းသား က ဟင်းချက်ပညာမှာထူးချွန်တဲ့ စားဖိုမှူးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ... ခပ်အေးအေးပုံစံပေါ့ ... စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး မင်းသမီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုကမှောက်ကမတွေ ဖြစ်ပြီး ချစ်သွားကြမလဲ ? မင်းသားရဲ့ရည်းစားဟောင်း ရောက်လာတဲ့အခါမှာရော ဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲ ?
ဗဟုသုတရစရာ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တဲ့အပြင် သဘာဝကျကျ ဟာသကလေးတွေပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးဖြစ်ပါတယ် ...
တစ်ပိုင်းမှာ မိနစ်၂၀စာ အတိုလေးရိုက်ထားပြီး စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်ကားလေးဖြစ်လို့အားလုံးကို ကြည့်ရှုစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ...
Main Actor အဖြစ် KPop Boy Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TVXQ အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jung Yun-ho က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
Main Actress အဖြစ် မင်းသမီးချောလေး Kim Ga-eun တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောငထားပါတယ် ...
Rating အနေနဲ့ကတော့ MyDramaList မှာ 7.4/10 ရရှိထားတဲ့ Romance / Comedy Drama series လေးလဲ ဖြစ်ပါတယ် ...
Translator - Lily ၊ Kaung Min Sett
Episode7( Openload Link )
Episode 8 ( Openload Link )
Episode9( Openload Link )
Episode 10 ( Openload Link )
Episode 11 ( Openload Link )
Episode 12 ( Openload Link )
Episode 13 ( Openload Link )
Episode 14 ( Openload Link )
Episode 15 ( Openload Link )
Episode 16 - End ( Openload Link )
Episode 16 - End ( pcloud Link )
Labels: Comedy Korea Romance
Unknown April 9, 2017 at 10:02 PM
Yin Yin Htway April 21, 2017 at 6:02 AM
Very good. Please keep uploading.
chan myae July 16, 2017 at 11:12 PM
အပိုင်း 13,14 and 16 က File Not Found ဖြစ်နေပါတယ် တစ်ချက်လောက်ပြန်စစ်ပေးပါဦးဗျ ကျေးဇူးပါ ..